Bazothola uqeqesho abasebenzi bamatekisi | News24
Bazothola uqeqesho abasebenzi bamatekisi
ISITHOMBE:SITHUNYELWE Laba abanye ouyimanje baqalile ukuqeqeshwa ukuze bazokwazi ukucija abasebenzi bemboni yamatekisi ngamakhono nangendlela okumele baphathe ngayo umsebenzi.
BONKE abasebenzi abangaphansi kwemboni yamathekisi bazothola uqeqesho oluzokwazi ukubacija mayelana nezinto eziningi eziphathelene nomsebenzi wamatekisi ngenhloso yokubathuthukisa.
Lokhu kuvezwe UMnu Jeffrey Ngobese obhekelene noqeqesho KwaZulu-Natal. UNgobese uphinde wathi lolu qeqesho kumanje oseluqalile njengoba selunamasonto amabili lusabheke ekuqeqesheni labo okuyibona abazoqeqesha abasebenzi bamatekisi.
Ngalokhu uthe ukuqeqeshwa kuzohlanganisa bonke abasebenzi kusukela kubashayeli, abanini bamatekisi, abasizi babashayeli kanye nabobonke nje abakulo mkhakha wokusebenza.
Echaza ngalolu hlelo uthe njengeSouth African National Taxi Council (Santaco) babone kukuhle ukuthi nabo baziqalele esabo isikhungo (academy) lapho bezokhiqiza khona ababo abaqeqeshi okuyibona abazoqeqesha ozakwabo.
Laba baqeqeshi bakhethwe ezifundeni ezingu-32 zika Santaco lapho kugcine kukhethwe abavelele nokuyibona ke abazoqeqesha abasebenzi.
“Lokhu sikwenza ngoba sifuna ukuthi imboni yamatekisi ithuthuke futhi ingahlale ithathwa njengemboni lapho kungenampatho khona. Sizoqeqesha abashayeli nabo bonke abanye abayingxenye ukubacija ukuze bakwazi ukuphatha umsebenzi.
Ukuqeqeshwa kwabo kuzokuba sezintweni eziningi ezahlukene, kodwa eziqondene nomsebenzi. Kumanje uqeqesho seluqalile luyenzeka eThekwini kanti ngesonto elizayo lokhu kuzobe sekwenzeka naseMgungundlovu. Sibhekene nezingqinamba eziningi nezinselelo kanti lokhu sifuna ukubhekana kahle nakho ngqo sesinethimba lethu labasebenzi eliqeqeshiwe futhi elaziyo ngomsebenzi,” kusho uNgobese.
Uthe lokhu bathe abakuthathele phezulu ngoba ngaphambilini yize bekwenzeka kodwa bekungabi yinto ephumelelayo.
“Into ebiyenzeka ukuthi bekuye kube noqeqesho obeluye lwenziwe kodwa lungenziwa uSantaco kodwa kwenziwe inkampani okuyiyo ephakela ngezidingo (service provider).
“Bekuye kungabi into lena esingafisa ukuthi thina njengemboni yamatekisi kube yiyona. Njengamanje-ke sesithe akesizibambele thina ngokwethu sizikhethele thina abantu esizobaqeqesha sibanikeza lolu lwazi thina esifisa ukuthi balunikeze abasebenzi bale mboni.
“Kuzothi-ke uma sebeqeqeshiwe abazoqeqesha bese luyaqala uqeqesho lwabasebenzi lubacijela umsebenzi,” eqhuba uNgobese.
“Lolu qeqesho luphinde lube nemigomo yebhizini ezobe yona isihlomulisa abanikazi bomsebenzi wamatekisi ngolwazi lokunakekela ibhizinisi ukuthi ligcinwa kanjani nokulikhulisa ngokunjalo